Ukuphupha ngeNkampani yeNtengiso Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Phupha neNkampani zorhwebo
Kude kube kwinkulungwane yama-XNUMX, abantu bathenga kwiivenkile ezincinci ezikufutshane phantse yonke imihla. Iimveliso zabekwa ngqo kwikhawuntara yevenkile kwingxowa yokuthenga ababeyizisile. Xa iivenkile zokuqala zokuzixhasa zavela, iibhaskithi zocingo ezikhethekileyo zaphuhliswa ezinokusetyenziswa ngumthengi kwivenkile yokugcina iimveliso.
Ukuqala nge-1950s, iitroli zokuthenga zazibandakanyiwe, iibhasikithi ezinkulu zokuthenga ezinamavili, apho ukutya okuninzi, iziselo kunye nezinye iimpahla zisenokuhanjiswa nanamhlanje. Inyani yokuba uhlala ubaqhuba emotweni yibhonasi eyongeziweyo.
Ukuba umntu uphupha ngenqwelo yokuthenga, unokukhumbula ebuthongweni ukuba kusafuneka ayokuthenga. Ukutolikwa kwephupha kuxhomekeke ekubeni ingaba imoto igcwele okanye ayinanto kwaye yintoni enqwenela ukuba umphuphi anayo.
1 Uphawu lwephupha «inqwelo yokuthenga» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «inqwelo yokuthenga» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «inqwelo yokuthenga» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «inqwelo yokuthenga» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuzalisa inqwelo yokuthenga ngeempahla zonke iintlobo, kutoliko lwamaphupha, luphawu lokuba umphuphi ngulo umvuzo ngomsebenzi wabo kunye nempumelelo. Uphawu lwephupha lubandakanya ukufezekiswa kwezicwangciso esele zilungiselelwe. Nangona kunjalo, ukuba ibhasikithi ayinanto ephupheni, umntu olalayo kufuneka alindele ukubuyela umva.
Indlela abathenga ngayo nayo ibalulekile. Ukuba umphuphi utyhala inqwelo yokuthenga ngaphandle kokufumana nantoni na, kucacile akanakho ukwenza izigqibo. Ukuba ngabom ubeka izinto ozifunayo ephupheni, umfanekiso wephupha ukhomba owomeleleyo Ukuzimisela phantsi. Ngokwenkcazo yephupha, ikwabonisa ukuba ixabiso libiza kangakanani. Mhlawumbi umntu ophuphayo uyazi kakuhle into ayifunayo, kodwa ixabiso linokuba phezulu kakhulu.
Ngenxa yobungakanani bayo kunye nokubanakho ukuyityhala, inqwelo yokuthenga inika ithuba lokuthenga iintlobo ezahlukeneyo kunye neemveliso ezahlukeneyo. Kule meko, uphawu lwephupha ngokuyintloko lumele inkululeko yokuzikhethela kwaye ke luphawu oluqinisekileyo.
Nangona kunjalo, inqwelomoya ifanekisela ukutolikwa kwamaphupha kwanobukho kunye nolwaneliseko lwe Iimfuno. Iphupha linokutsalela ingqalelo kwinto yokuba kubomi bokwenyani umntu oleleyo uzama ukufumana amaxabiso angenakuthengwa, anje ngokuqaphela okanye ukuthanda.
Inqwelo yokuthenga egcweleyo isephupheni, inkulu yeyona yokwenene i-nostalgia ingqalelo. Isimboli yamaphupha ihlala ibonisa ukogqitha kunye nokungabikho kokuziqeqesha kuhlalutyo lwamaphupha.
Uphawu lwephupha «inqwelo yokuthenga» - ukutolikwa kwengqondo
Inqwelo yokuthenga isetyenziswa ngokubanzi kwivenkile enkulu. Kwelinye icala, oku kubonakaliswa kukhetho olukhulu, kwelinye icala, ngamanye amaxesha luyabhidisa.
Ukutolikwa kwengqondo ephupheni, uphawu lwephupha "inqwelo yokuthenga" ke yinto ekubhekiswa kuyo Ukufa isiqaqa ngokuchasene neengxaki zobuqu. Umphuphi uziva ubunzima bakhe kubomi bokwenyani njengeziphithiphithi ezingalawulekiyo. Ukubeka iimveliso ezikhethiweyo kwingobozi ephupheni ngumzamo we-subconscious yokwenza ucwangco.
Umfanekiso wephupha ukwabhekisa kokuqinisekileyo xabiso uhlobo lwezinto okanye uhlobo lweemvakalelo, olufunyenwe ngumntu oleleyo ebomini bakhe bonke. Oku ngokomfuziselo kwinqwelo yokuthenga kwaye ekugqibeleni bakhutshelwa khona kwakhona. Ngokutsho kohlalutyo lwamaphupha, eli nyathelo luphawu lokuba umntu ophuphayo ukulungele ukwabelana ngamava abo kunye neziphumo kunye noontanga babo.
Uphawu lwephupha «inqwelo yokuthenga» - ukutolika kokomoya
Inani elikhulu leemveliso lilungele kwinqwelo yokuthenga. Emva kokuqonda ukutolikwa kwamaphupha okomoya, uphawu lwephupha lumele ubutyebi amandla engqondo Kuxhomekeka ekubeni umxholo wenqola yokuthenga ubonakala uluncedo kulowo uphuphayo okanye akunjalo, umfanekiso wephupha unokuvulwa kwakhona. umthwalo wobukrelekrele tsalela ingqalelo kwinto ethintela ukukhula ngokomoya.